पाँचतारे होटलको किचनमा छिर्न पाइन्छ, स्कूलमा किन नपाउने ? – Satyapati
Loading... आजः १४ माघ २०७७, बुधबार
पाँचतारे होटलको किचनमा छिर्न पाइन्छ, स्कूलमा किन नपाउने ?
भोजराज शर्मा ‘नादिर’
तारे होटलमा गेटैपिच्छे सलामी खाएको, टेबुलमा वेटरलाई दासझैं हकार्दै अह्राएको, १०० रु टिप्स दिँदा होटलै किनेँजस्तो गरी छाती फुलाएको पनि देखियो ।
क का कि की र ए फर एप्पल नै सिकाउने कथित महान् स्कूलमा १ कक्षामा छोरो भर्ना गर्न मन्त्रीको सोर्स लगाएँ भनी धक्कु लगाउँदै हिँडेको पनि देखियो ।
अनि त्यही स्कूलमा ३ मिनेट ढिलो हुँदा गेटपालेले गेटैबाट बाबुछोरालाई फर्काइदिएको अपमान पचाएर पनि त्यही स्कूललाई महान् भनिरहेको दास मानसिकता पनि देखियो । यो आँखाले कति दरिद्र मानसिकता देख्नुपर्ने हो अझैं ?
फाइभ स्टार होटलको म्यानेजरलाई थर्काउन सक्ने नेपालीले एक कम्पनी स्कूलको गेटपालेसँग झुक्नुपर्ने तर उसैले छिर्न नदिँदा लुरुक्क बच्चासँगै फर्किनुपर्ने ? किन के छ त्यस्तो त्यो स्कूलमा ? कुन ग्रहका मालिक छन् त्यहाँ ?
कुन ग्रहका शिक्षक शिक्षिकाले कुन ग्रहको ज्ञान दिन्छन् त्यहाँ ? कुन नक्षत्रको पानी र कुन ग्रहको खाना दिइन्छ त्यहाँ ? हरेक अभिभावक समय लिएर आफ्नो बच्चाको पढ्ने कोठामा बसेर क्रियाकलाप अनुभव गर्न पाउनुपर्छ । पाँचतारे होटलको किचनमा छिर्न पाइन्छ स्कूलमा किन नपाउने ?
के छ वामदेवको ‘नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान’को अवधारणापत्रमा ? (पूर्णपाठ)
मापसे गरेर सिक्री, औँठी र ब्रासलेट लुट्ने दुईजना पक्राउ
तीन महिनाभित्र सबै नेपालीले निःशुल्क खोप पाउँछन् : प्रधानमन्त्री
जनकपुर यातायात कार्यालयमा अख्तियारकाे छापा, घुस रकमसहित दुई जना पक्राउ
कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु : आज मात्रै १२ हजार व्यक्तिले खोप लगाउने
कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु भएकोमा हर्षित छु : राष्ट्रपति भण्डारी
बझाङमा खुडा प्रहार गरेर युवकको हत्या
तोलामा ७०० घट्यो सुनको मूल्य